Kusukela esikhathini esidlule, abantu banikeze amatshe amaningi ngamagilisi nokuphulukisa. I-Quartz iphinde ibhekisele kumaminerali aqinile futhi ahloniphekile. Kubizwa nangokuthi itshe likaTamerlane, izinwele zeVenus, imicibisholo ye-Cupid, idayimane laseMexico. Emvelweni, kunezinhlobonhlobo eziningi zalezi zimaminerali. Izibonelo ezicacile zibizwa ngokuthi i-rock crystal, i-smoky - i-rauchtopaz, i-yellow-citrine, i-brown - aventurine, i-violet - i-amethyst, i-red-hematite, i-pink ne-milky-white matshe nayo iyaziswa kakhulu.
I-quartz iyabonakala futhi iguquguqukile. Igama layo livela egameni lesiJalimane elithi "kvererts", elihunyushwe lisho ukuthi "i-transverse ore", ngoba lakhiwa ngaphesheya kwe-ore vein. Naphezu kokuthi lokhu kungenye yamaminerali avamile kakhulu emhlabeni, i-crystal ibhekwa njengeyigugu. Ama-deposit main agxila eBrazil, eMadagascar, e-Afrika, nakuba yizinani ezincane, cishe emhlabeni jikelele, leli tshe liyatholakala.
I-quartz eluhlaza, noma i-prazem, ithathwa njengomthombo onamandla wokudala, ngakho-ke kunconywa ukuba uyigqoke kubaculi, abalobi, abaculi kanye nabanye abantu, okubalulekile kubo ukusebenzisa umcabango ocebile kule ndaba. Itshe lisiza ukulwa nokuphikisana. Ngisho nama-pragmatists, abanentshisekelo yakhe ehlose ukucebisa impahla, ngeke balwe namandla e-crystal. I-Przem inikeza ikhono lokuphupha, ukuqonda abanye, ngakho-ke kuthiwa yi-talisman yabathandi. Abantu abahlukumezayo bangathuthukisa amakhono we-telepathic, ngisho nezimo ezimbi kakhulu zizoqala ukubona amaphupho agqamile.
I-quartz eluhlaza ivuselela umuzwa wombala futhi inikeza indlebe yomculo. I-prasem inezindawo eziphulukisayo zokuphulukisa, yenza kancane kancane, iphilisa umzimba. Uyophinde akhuthaze inhlalakahle yomnikazi futhi amcebise ngendlela eqotho, ngoba amanga nokukhohlisa ngeke kubekezelele leli tshe.
I-quartz eluhlaza okwesibhakabhaka ayidabuli kakhulu emvelweni, ngakho-ke abaphulukisi kanye nabalumbi bayakujabulela. Unika umnikazi wakhe ukuthula nokuthula. I-crystal inomphumela omuhle kakhulu futhi ongabonakali kumuntu. Shintsha noma yini ekuphileni, i-mineral ayikwazi, kepha ingakufundisa ukuba uzwe ngokuthula konke okushiwo yiziphetho. Ngisho nezimo ezibucayi kakhulu nezizwelayo zeluleka ukugqoka lawa matshe.
I-Quartz, ngokusho kwabahlengikazi, izoletha inzuzo enkulu emzimbeni, uma iphuma kuyo ukwenza imifanekiso yamanzi. Isiphuzo esinjalo siphuthumisa izinqubo zemithi, sithuthukisa ukutakula. Ukuqhubeka kwamanzi we-quartz kungasetshenziselwa izimonyo: uma kuhlanzwa okungenani zonke izinsuku, isikhumba sizobonakala senziwe futhi sivuselelwe. Abaningi be-lithotherapists bavumelana ukuthi lawa matshe asebenza kahle kakhulu ezithombeni zokuphefumula. I-Quartz ihlinzeka inkambo yamakhaza amaningi.
Ezikhathini zasendulo, abapristi nabasebenzisa amakhemikhali abenziwe ngamakristenti benza ama-lens nama-balls lapho ama-altare ayekhanya khona. Ukusebenzisa i-quartz, bakwazi ukutshela ngezinto ezedlule futhi babone ikusasa, ngakho-ke leli tshe liyanconywa ukuthi lisebenzise izimpilisi kuphela eziqinile futhi ezinolwazi. Kubizwa nangokuthi i-crystal yezinkolelo, ngoba ingaphazamisa kalula umuntu, unikeze lokho okufunwa yiqiniso. I-Quartz ilungele i-Libra ne-Scorpio, i-Gemini ne-Virgos ngokungafaniyo.
Umndeni wezinyih - izilwane ezincelisayo
Hydration we propylene: Isibalo ukuphendula